Maqal: War Hada Naga Soo gaaray Villa Somalia R/Wasaare Kheyre oo Lagu Amray inuu Magacaabo Wasiirada Cusub | Nabadqaad Online
Maqal: War Hada Naga Soo gaaray Villa Somalia R/Wasaare Kheyre oo Lagu Amray inuu Magacaabo Wasiirada Cusub
Guddoomiye-ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa sheegay in ra’isal-wasaaraha ay ka dalbadeen in uu si degdeg ah ku soo dhiso Xukuumada.
HALKAN KA DHAGEYSO AMARKA LA SIYAY R/W
Mudane Mahad oo ka qeybgalayay kulan ay xildhibaannadu kaga hadlayeen xaaladda abaaraha ayaa waxa uu caddeeyay in xildhibaannadu ay hadda u xayiran yihiin ansixinta xukuumadda cusub, si markaas ka dib ay ugu ambabaxaan deegaannadii laga soo doortay, iyaga oo doonaya ka-qeybqaadashada howlaha loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu dhibaateeyeen.
Guddoomiye-ku-xigeenka 2aad ee baarlamanka ayaa waxa uu carrabka ku adkeeyay in ay muhiim tahay in dhaqsa loogu dhawaaqo golaha wasiirrada, si aan waqti badan loogu luminin magacaabistooda iyo ansixintooda, maadaama ay jirto xaalad abaareed oo howlgal degdeg ah u baahan.
Waxa uu guddoomiye-ku-xigeenku ugu baaqay hey’adaha dowladda, gaar ahaanna kuwa u xilsaaran gurmadka abaaraha, in ay howlahooda la kaashaadaan xildhibaannada Baarlamanka, oo iyaguna diyaar u ah ka-qeyb-noqoshada gurmadka socda.
Xildhibaannada Baarlamanka ayaa ku dhaliilay dhinacyada loo xilsaaray howlaha gurmadka in aanay si hagaagsan u maamulayn lacagaha gurmadka loogu talogalay, waxaana ay xildhibaannadu codsadeen in lala xisaabtamo dhinacyadaas.